ကြွား Wallpaper — ခရီးစဉ်လီ
Enane† • ဧပြီလ 12, 2014 တွင် 5:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Thanks for the wallpapers bro. သူတို့ကိုချစ်တယ်. There is far greater meaning to them than just bragging, but bragging on the One True King, ယရှေုသညျ. မင်္ဂလာရှိသောနေပါ. †
သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. Your words not only glorify God but they help me keep focus on my relationship with Him. Much love.
Chris • စက်တင်ဘာလ 12, 2014 တွင် 4:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Hey bro, big fan, ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ. We are one in Christ.
Julia Rieb • အောက်တိုဘာလ 14, 2014 တွင် 9:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
All I need is 1:16 to brag on my Lord, brag on my King. Talk about ‘im daily cuz He runs this thing! Thanks for the wallpaper, ခရီးစဉ်ကို!